Kubhilite idlozi ithwasa lidlwengulwa | isiZulu
Kubhilite idlozi ithwasa lidlwengulwa
Amadlozi athume ithwasa lomlungu ukuba lihlanganise isizwe
Ithwasa lithi umqashi wathi liyanuka
Limlahlile obesolwa ngokubulala ithwasa
Durban - Kuvuke abaphansi lahayiza laklewula ithwaswa lidlwengulwa lathela ngesibhakela obelenzakalisa kodwa babuye balotha bathi akangaboshwa akahlawule ngesenzo sakhe.
Lesi sigameko kuthiwa senzeke endaweni yaKwaSanti ngasePinetown entshonalanga yeTheku ngeledlule lapho ophethe isigodlo ethe ithongo lithi lo mlisa akahlawule ngezinkomo ezimbili ezithi mo.
Kubikwa ukuthi lesi sigameko senzeke ngeledlule ngesikhathi ithwasa (esiligodlile igama lalo) lihambe nomzala walo kade kubuywa komunye umcimbi obusebusuku.
Kubikwa ukuthi lona wesilisa (naye esigodle igama lakhe) odlwengule leli thwasa, uyisoka lomzala walo ithwasa ebelihamba naye. Kuthiwa emuva kokuba lona wesilisa enze lokhu, ube eseyalelwa uyisemkhulu wethwasa (ithonga) ukuthi ahlawule ngezinkomo ezimbili ezihamba ngezinyawo kanye neyemali.
Kuthiwa umndeni wethwasa awuzange ulivule icala njengoba uyalelwe yithongo ukuba bangalivuli icala kodwa lona wesilisa ahlawule nje bese exolisa ngokwenza lesi senzo.
OLUNYE UDABA: Ithwasa lithi umqashi wathi liyanuka
Ekhuluma neLANGA unina waleli thwasa ongeke adalulwe ukumvikela uthi yize kunzima kodwa sebesamukele isimo njengoba indodakazi yakhe isihlawuliwe nomfana waxolisa ngesenzo sakhe kwagezwa nesigodlo lapho ithwasa khona.
Uthi lesi sigameko senzeke ebusuku ngesikhathi indodakazi yakhe ihambe nomzala wayo kuyiwe komunye umcimbi.
"Bahlalile kuloya mcimbi abekade beye kuwo, baqeda lapho base behamba nesoka likamzala wakhe bayolala kubo kwalo ngoba bese kuhlwile bengeke besakwazi ukubuya bodwa ngezinyawo. Indodakazi yami ibilele phansi, isoka nomzala wakhe belele embhedeni.
"Kuthe sebezumekile, isoka lehla embhedeni ladlwengula indodakazi yami lingazi ukuthi iyathwasa. Uye waphaphama wavukwa yithongo lakhe okuwumkhulu wakhe waba nolaka balwa nalo mfana ehayiza.
"Ugcine esebaleka lo mfana wabe esebulala impahla endlini indodakazi yami seyivukwe ngabantu abadala becikwa yinto ebeyenziwa yisoka likamzala wakhe,"echaza.
Uthi iba nolaka kushintshe nendlela akhuluma ngayo kuzwakale umkhulu (ithonga). Ubulale wonke amafasitela asendlini kwaze kwaphuma nomakhelwane bezwa umsindo.
"Mina ngibe sengithola ucingo kumzala wakhe engitshela ukuthi mangiphuthume ngiphathe impepho kanye nebhayi lakhe.
"Sivuke ebusuku sanikela khona samfica equlekile samshisela impepho wavuka. Ithonga libe selisiyalela ukuba lo mfana akhulume iqiniso bese ehlawula ngezinkomo ezimbili okungebomvu ehamba ngezinyawo, kanye neyemali.
"Ithonga liphinde lasiyalela ukuthi lo mfana kumele ayogeza isigodlo ngehlazo alenzile edlwengula umzukulu wakhe. Sibe sesiyithatha sagoduka nayo indodakazi yami. Kuthe ngakusasa yavuka isigongobele ingasakwazi ukuhamba. Bafikile abakubo komfana kwabe sekuyoxoliswa esigodlweni lapho ethwasela khona," kusho unina wengane.
Eqhuba uthi umfana ube eseyafika nabakubo emzini wakhe belethe izinkomo ebezifunekile.
"Baqale bafika nenkomo emnyama kodwa ithonga labayalela ukuba baphindele emuva bayolanda abomvu njengoba belishilo.," kusho yena.
Uthi abalivulanga icala ngoba bayalelwe yithonga lendodakazi ukuthi bangayi emaphoyiseni kodwa bagcine ngokwamukela inhlawulo nje kuphela.
UDkt Velaphi "Bhedlindaba" VVO Mkhize uvumile ukuthi uyalwazi lolu daba wathi le ntombazane ibithwasa khona esigodlweni.
"Ngingakuqinisekisa ukuthi umama wentombazane ufikile belethe imali engu-R2 000 yokuthenga imbuzi obekumele igeze isigodlo lapho ithwasele khona intombazane. Bangichazelile ngaso sonke isigameko kwase kuhlawulwa intombazane ngenkomo njengoba bekusho umkhulu wayo" kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uCol Thembeka Mbhele, uthi kumele lona wesifazane ayovula icala ngoba ukudlwengula yicala elinzima.
"Le nto eyenziwe yilona wesilisa iphambene nomthetho, ngakho kumele lona wesifazane avule icala ukuze umsolwa ezoboshwa, kodwake asikwazi ukumphoqa ukuba alivule icala ngoba usekhulile futhi unelungelo lokuzithathela izinqumo zakhe.
"Kumele sikuqonde ukuthi umuntu odlwenguliwe uba nokuphazamiseka engqondweni. Ngakho abantu kumele bawabike amacala anjena," kusho uMbhele.
Pretoria - 09:45:02 AM CRASH at Eskia Mphahlele Drive - QUEUING TRAFFIC Ezinye zasemigwaqeni